News - Pointer Pattern Aluminum Plate အမျိုးမျိုး၏အမျိုးမျိုးသောအသုံးချမှုများ applications ။
လူမီနီယံ Checker ကိုပြား
Pointer ပုံစံလူမီနီယမ်ပြား၏ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၏ကွဲပြားခြားနားသော applications များဘာတွေလဲ？
patterned လူမီနီယံပြား၏အခြေခံ function ကို slippage ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးအများဆုံးအခြေအနေမှာဘတ်စ်ကားများ၊ စက်လှေကားများ၊ ဓာတ်လှေကားများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပုံစံပြုထားသောလူမီနီယမ်ပြားများသည်လျှောကျခြင်းမှကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်လူမီနီယံပြားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များသည်မြင့်မား။ မရသည့်အပြင် ၁၀၆၀ အလူမီနီယမ်ပြားများသည်စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီနိုင်သည်။ ဒီတော့ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် patterned လူမီနီယံပစ္စည်းလျှောက်လွှာများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ? အောက်ဖော်ပြပါသည်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးရန်သေးငယ်သောစီးရီးဖြစ်သည်။
အအေးခံပစ္စည်းကိရိယာများမှာလည်းမတော်တဆဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်သံချေးစားခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အဓိကညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ၁၀၆၀ အလူမီနီယံစွမ်းဆောင်ရည်သည်ရေခဲသေတ္တာဆန့်ကျင်မှုစွမ်းအားကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စီမံကိန်း skid ။ အလူမီနီယမ်ပြား ၃၀၀၃ အပြင် 3A21 အလူမီနီယံပြားကိုလည်းပိုမိုတွေ့ရသည်။ အားလုံးသည်အလူမီနီယမ်မန်းဂနိစ်သတ္တုစပ်ပြား ၃ ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၅ စီးရီးအလူမီနီယမ်ပြား၏အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာအက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီပတ်ဝန်းကျင်ရှိချေးများကိုထိထိရောက်ရောက်ခုခံနိုင်ခြင်းကြောင့် 5052 အမျိုးအစားအလူမီနီယမ်ပြားသည်အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဓိကမစားရသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၅ စီးရီးအလူမီနီယမ်ပြားမှာ ၅၀၈၃၊ ၅၇၅၄ စတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေလည်းရှိတယ်၊ အဲဒါကိုပုံစံပြုအလူမီနီယမ်ပြားကိုထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်တယ်။
ပုံစံလူမီနီယံပြား၏အသုံးပြုမှုဘာတွေလဲ? ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပုံစံဒီဇိုင်းလူမီနီယံပန်းကန်စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်မြင့်မားသည်, 6061 ပုံစံလူမီနီယမ်ပြားမွေးဖွားခဲ့သည်လုံခြုံမှုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောလေကြောင်းချီပလက်ဖောင်း, မြင့်မားသောအပူချိန် anti-skid, မြင့်မားသောအက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီချေးပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်လျှောက်လွှာမြင်ကွင်းရှိပါသည်။ 6061 အလူမီနီယမ်ပြားသည်စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံး၏ရှုထောင့်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးမြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ခိုင်မာသည့်ကာကွယ်မှုကိုပေးနိုင်သည်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာသည် Ketchum မှသင့်အားမိတ်ဆက်ပေးသောအလူမီနီယံပြားအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအသုံးချပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်အရည်ပျော်နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တိုးတက်မှုတို့ကြောင့်အလူမီနီယမ်ပြား၏ပုံစံများနှင့်ပစ္စည်းများသည်ပိုမိုများပြားလာပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။
post အချိန်: နိုဝင်ဘာ -19-2020
di ၏ကွဲပြားခြားနားသော applications များဘာတွေလဲ ...
ပုံမှန် floating သံချေးနှင့်မည်သို့ကြည့်ရှုမည် ...
အဆင်တန်ဆာလူမီနီယံ plat သန့်ရှင်းရေးကိုဘယ်လို ...
လိပ်စာ: Wenzhou ရိပ်သာတောင်ဘက်၊ Xuzhou စက်မှုဥယျာဉ်၊ Jiangsu ပြည်နယ်တရုတ်
လူမီနီယံကွက်စာရွက်စျေးနှုန်း, စျေးပေါသောလူမီနီယမ်စာရွက်များ, 7050 လူမီနီယံစာရွက်, Anodized လူမီနီယမ်စာရွက်သတ္တုပေးသွင်း, လူမီနီယံအလွိုင်း 6061 စျေးနှုန်း, ပြားလူမီနီယမ်စာရွက်များနင်း,